नेपाल वायु प्रदूषणः ‘रातो सूर्य सोझै हेर्दा आँखाको दृष्टि गु’म्न सक्छ’ – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारनेपाल वायु प्रदूषणः ‘रातो सूर्य सोझै हेर्दा आँखाको दृष्टि गु’म्न सक्छ’
नेपाल वायु प्रदूषणः ‘रातो सूर्य सोझै हेर्दा आँखाको दृष्टि गु’म्न सक्छ’
काठमाडौं : केही दिनदेखि काठमाण्डू उपत्यकासहित नेपालका धेरै भागमा तु’वाँलो लागेको छ। डढेलोका कारण वायु प्रदूषण बढेको र तु’वाँलो लागेको हुँदा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। वायु प्रदूषण बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रवार सबैलाई सा’वधानी अ’पनाउन आग्रह गरेको थियो।
मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्यको ख्या’ल गर्न, घरबाहिर ननिस्किन, अनावश्यक रूपमा सवारीसाधन नचलाउन, फोहोर नचलाउन र धूलो र धुवाँ उत्पन्न हुने खालका निर्माण कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार काठमाण्डू उपत्यकामा अहिले देखिएको प्रदूषणका कारण सावधानी नअपनाएमा मानव स्वास्थ्यमा ग’म्भीर खालका अ’सरहरू पनि पर्न सक्छन् ।
धेरै मानिसले आँखा र नाक पो’लेको तथा सा’स फे’र्दा स’मस्या भएको गु’नासो गरेका छन् । तर कतिपय मानिसले भने चन्द्रमा र सूर्य पनि रातो दे’खिएकाले सोझै हेर्ने वा तस्बिर खि’च्ने गरिरहेका छन्। प्रदूषणका कारण हावामा सू’क्ष्म कणहरू भएकाले सूर्य र चन्द्रमा र’ङ्गीन देखिएका हुन्।
तर त्यसरी सूर्य हेर्दा आँखा बि’ग्रिन तथा दृ’ष्टिपूरै गु’म्न पनि सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। घाम र प्रदूषणबाट अहिलेको अवस्थामा आँखालाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ ? नेत्र श’ल्यचिकित्सक डा. किशोरराज प्रधानसँग कुराकानी गरेर सृजना श्रेष्ठले बनाएको यो भिडिओ हेर्नुहोस्। भिडीयो यहाँ लिंकमा छ ।